भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज स्वदेश प्रस्थान - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज स्वदेश प्रस्थान
साउन ११ । काठमाडौ, नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज आज स्वदेश भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज स्वदेश प्रस्थान साउन ११ ।
काठमाडौ, नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज आज स्वदेश फर्कनु भएको छ । २३ बर्षपछि भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन शुक्रबार साँझ काठमाडौं आउनुभएकी स्वराज आज बिहान साढे १० बजेपछि स्वदेश फर्किनु हुने भएको हो ।
यसैबीच भारत फर्कनु भन्दा अघि मन्त्री स्वराजले आज बिहान नेकपा एमालेका नेताहरुसँग भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ता बौद्धस्थित होटल हायातमा भएको हो । एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमसँग हिजो नै भेटघाटको समय तय भएपनि व्यवस्तताका कारण भेटवार्ता हुन नसकेपछि आज भएको हो । गौतमलाई भेटवार्ताका लागि मल्ल होटलमा बोलाएर नआएको भन्दै एमाले नेताहरु हिजो रुष्ट भएका थिए । गएराति अबेर सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयूक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । स्वराजले यसअघि नै राष्ट्रपति डाक्टररामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभामुख सुवास नेम्वाङ तथा विभिन्न मधेसवादी दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो । भएको छ ।
२३ बर्षपछि भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन शुक्रबार साँझ काठमाडौं आउनुभएकी स्वराज आज बिहान साढे १० बजेपछि स्वदेश फर्किनु हुने भएको हो .
यसैबीच भारत फर्कनु भन्दा अघि मन्त्री स्वराजले आज बिहान नेकपा एमालेका नेताहरुसँग भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ता बौद्धस्थित होटल हायातमा भएको हो ।
एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमसँग हिजो नै भेटघाटको समय तय भएपनि व्यवस्तताका कारण भेटवार्ता हुन नसकेपछि आज भएको हो ।
गौतमलाई भेटवार्ताका लागि मल्ल होटलमा बोलाएर नआएको भन्दै एमाले नेताहरु हिजो रुष्ट भएका थिए ।
गएराति अबेर सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयूक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
स्वराजले यसअघि नै राष्ट्रपति डाक्टररामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभामुख सुवास नेम्वाङ तथा विभिन्न मधेसवादी दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो ।
एपेक्स बैंकको घोटाला काण्डमा नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी पक्राउ
काठमाडौं । एनसीसी बैंकमा मर्जर भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको घोटालामा संलग्न थप एक व्यक्तिलाई प्रहरीले […]
यसरी खेर जाने भयो काजको ‘घुस’
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कडाइ गरेसँगै गत असोज–कात्तिकमा हाकिमलाई […]
काठमाडौं । नाकाबन्दीका बेला ‘लिफ्ट कल्चर’ निकै लोकप्रिय थियो । लिफ्ट कल्चरबाट पाठ सिकेर केही सिर्जनशील […]
विद्यालयका सवारी साधानलाई नयाँ ट्राफिक नियम लागु, के छ नियममा ? सूचना सहित
काठमाडौं । पौष १ गते देखि विद्यालयका सवारी साधान सम्बन्धी नयाँ ट्राफिक नियम लागु हुने भएको छ । महानगरीय […]